DHEGAYSO-Shacabka Garoowe oo Digniin u Diray Camey iyo Gaas Keese Ayey Taageereen.
Shacab weynaha ku dhaqan magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa si yaabo kala duwan uga hadlay khilaafka ka dhex aloosan madaxweynaha Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas iyo ku xigeenkiisa, waxaana ay sheegeen in gudida khilaafaadka Puntland ee Gaas soo magacaabay ay yihiin kuwo jira.
Shacabka qaar ayaa sheegay in Camay uusan xaq u lahayn magacaabista gudida khilaafaadka Puntland isla markaasna ay haboon tahay in khilaaf uu xiligani soo kala dhex galin labada masuul, halka qaarkood ay eedeyn u jeediyeen labadoodaba.
Say awalba ahaan jirtey gudiga khilaaf saaridda waxaa soo magacaabi jirey madaxweynaha pyuntlaan.Hadda kor puntlaan sooma marin in uu madaxweyne ku xigeenku soo magacaabo gudigaas.Tan kalke Ina Camay isagaaba sheegay in uu xamar ka amar qaato.Xamarna waa cadawga koowaad ee puntlaan iyo reer pyuntlaanba.
Sicid Warsame says:
Camay waa maskiin Farmaajo iyo Khayre isticmaalahayan ku shaqaysanahayaan. Sababto Puntland uu burburin rabaan waxa waaye qarinta fashilkood.
Gubista suuqa bakaaraha (2 goor)
Qaraajinta saraakiisha iyo askarta kooxda nabar iyo naxdiin maalin walbo ku dhacahaysa (argagaxisadaAL SHABAAB ayaa ka guulaysatay nabar iyo naxdin) waa fashilka hagaajinta amaanka, źPuntland buuraha uu eryotay argagaxisada laakin Farmaajo Khayre waa ku fashilmeen dagaalka argagaxisada
waxa ku yiraahdeen Itoobiya “ciidankiin iyo ciidanka erataria keena Somalia gudahiis maxa yeelau hal.wadan ayaa nahay idinka(xabashi) ayaa ino talinahaysa